Dowlada Federaalka wey ka go’antahay wax u qabashada Muwaadiniinteeda | Baydhabo Online
Car bomb wounds at least two in Somali capital...
Somali kidnapper gets 15-year sentence
Somali PM meets with Norwegian foreign minister in Oslo
Somalia will prevail in Maritime Boundary Dispute, says Attorney General
Dowlada Federaalka wey ka go’antahay wax u qabashada Muwaadiniinteeda
Dowlada Federaalka Soomaaliya wey ka go’antahay wax u qabashada muwaadiniinta Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan.
Dowladda Federaalka Soomaaliya iyadoo ka duuleysa muhiimada wargelinta shacabka marwalba si ay xaalada ula socdaan ayaa Dowladu waxey baaq u direysaa shacabka ee ku aadan dhibaatooyinka tahriibka si loo yareeyo khasaaraha shacabka ka soo gaara iyagoo u tahriibaya dalal kale. Dowladu waxey si joogta ah ula socotaa dhaqdhaqaaqyada iyo xaaladaha muragada leh ee ka soo yeereysa tahriibka badaha oo shacab fara badan ay waxyeelo ka soo gaartay.
Sidaas daraadeed, Dowlada Federaalku waxey shacabka u xaqiijineysaa inay wado dadaal walba oo lagu badbaadinayo muwaadiniinta Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan. Dhowaan ayey aheyd markii ay Dowladu heshiis la gashay Dalka India si maxaabiista Soomaaliyeed dib dalkooda loogu soo celiyo.
Dowladda Federaalku waxey sameysey Guddiyo Heer Wasiir iyo Heer farsamo oo wax ka qaban doono Tahriibka iyo sida loo badbaadin lahaa Muwaadiniinta Soomaliyeed ee dhibaatada heysata.
Sidoo kale Dowlada Federaalku waxey wadaa shirar wada tashi oo ay la yeelaneyso Hay’ado Caalami oo ku lug leh arrimaha tahriibka kana shaqeeya wadamada ay ka mid yihiin Libiya iyadoo kala hadashay sidii xal loogu heli lahaa dhibaatada taagan.